Syria: Mandefa ireo fanampiana any Gaza ny Vokovoko Mena (Volantsinana Mena) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2019 3:40 GMT
Araka ny filazan'ny Syria News Wire:
Nandefa kamiao ny volantsinana mena, rehefa avy nanangona ireo fanomezana avy amin'ny olona manerana an'i Syria ny mpilatsaka an-tsitrapo. Nitondra fanafody sy sakafo izy ireo.
Hiala an'i Syria izy ireo ary hiditra ao Jordania, eny an-dalana ho any Gaza amin'ny 10 ora maraina amin'ny Asabotsy. Raha te-hanaraka ny fivoaran'izy ireo ianao, na hanolotra fanomezana, dia afaka manaraka ny Twitter-n'izy ireo ato.
Ananan'ireo olona ao amin'ny sary ireo trosam-pankasihatrana izahay. Ny mpilatsaka an-tsitrapo, noho ny fahafoizam-potoana- ary ny olona izay nanolotra fanampiana, nahafoy ny volan'izy ireo.
Miasa momba ny ezaka web 2.0 amin'ny fandaminana i Anas Qtiesh, mpandika-teny ao amin'ny GV Arabo sady mpilatsaka an-tsitrapo efa ela tao amin'ny volantsinana mena, manome vaovao farany ao amin'ny Twitter mikasika ny fahombiazan'izy ireo, ary mampahafantatra amin'ireo mpanjohy ny fomba ahafahan'izy ireo manohana ny ezaka:
*Fanamarihana: Noho ny sazy amerikana, dia tsy afaka manome fanampiana ho an'ny vokovoko mena Syriana Arabo ireo monina any Etazonia. Ny fandaminana tsara ahafahan'ny mponina Amerikana manolotra fanomezana dia ny Firaisan'ny Ankizy afovoany Atsinanana.
Sarin'ireo kamiao eny an-dalana ho any Gaza navoaka tao amin'ny Flickr:
Nanangana fantsona YouTube ihany koa ny volantsinana mena izay handefasan'izy ireo lahatsary misy ny asan'izy ireo, sy vondrona Facebook mba hanapariahana ny teny.